फोटो अनलाइनमा पृष्ठभूमि कसरी परिवर्तन गर्ने? | सबैका लागि उपयोगी जानकारी।
अनलाइन फोटोमा पृष्ठभूमि कसरी परिवर्तन गर्ने?
अब इन्टरनेटमा तपाईले फोटोशप अनलाइन एकदम पाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ एक उदाहरण छ। यस प्रकारको फोटोशपमा तपाईले आफ्नो फोटो दुबै कम्प्युटरबाट र यूआरएल मार्फत अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईं आफूले चाहेको कुनै पनि फोटोको पृष्ठभूमि बदल्न सक्नुहुन्छ। एकै साथ फोटोको कन्ट्रास्ट र चमक परिवर्तन गर्न सम्भव छ। सामान्यतया, फोटो मोन्टेजका लागि त्यहाँ धेरै विकल्पहरू छन्। यो सेवाहरू मध्ये एक मात्र हो, त्यहाँ धेरै धेरै छन्, र तपाईं कुनै पनि जुन तपाईंसँग काम गरेर रमाईलो प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ!
अब फोटोमा पृष्ठभूमि परिवर्तन गर्न को लागी पर्याप्त सजिलो छ, त्यहाँ धेरै तस्विर सम्पादकहरू अनलाइन छन् तर मेरो मनपर्ने र उत्तम मध्ये एक पिक्सेलर हो। तपाईं आफ्नो फोटोको पृष्ठभूमिलाई केही मिनेटमा परिवर्तन गर्न सक्नुहुनेछ, साथै, यसले तपाईंलाई फ्रेमबाट पोष्टकार्ड बनाउनको लागि अनुमति दिन्छ, र कसैको अनुहार पनि पर्दा बन्द गर्दछ।
अनलाइन तस्विर पृष्ठभूमि परिवर्तन गर्नुहोस्
तपाईं पृष्ठभूमि परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। अनलाइन फोटोशप वास्तवमै पर्याप्त छ। तर तपाइँले बुझ्नु आवश्यक छ कि मुख्य काम सेवा द्वारा तपाइँले गर्नुपर्नेछ। कार्यको जटिलता तपाईको छविमा निर्भर गर्दछ - तपाईलाई मनपर्ने वस्तुलाई छनौट गर्न कत्ति गाह्रो हुन्छ।
तपाईंको फोटोहरूको द्रुत सम्पादनको लागि त्यहाँ धेरै सेवाहरू छन्। त्यहाँ तपाईंले आफ्नो फोटो अपलोड गर्नुभयो र परिवर्तन गर्नुभयो। तपाईं पृष्ठभूमि परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ, फोटो कोलाज बनाउन सक्नुहुन्छ, तपाईंको फोटोमा आकर्षक प्रभावहरू थप्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि यो सबै पहिले नै सम्पादन गरिएको छ हार्ड ड्राइवमा बचत गर्नका लागि। यी कार्यक्रमहरूमा फनफोटोबक्स, फोटो 505०XNUMX र अन्य धेरै समावेश छन्।
यहाँ आवश्यक र पर्याप्त कार्यहरूको सेटको साथ एक सम्पादक छ जुन नेटवर्कमा प्रशंसा गरिन्छ जो वास्तविक फोटोशप जस्ता राक्षससँग गडबडी गर्न चाहँदैनन्। केवल जादुई बटन उद्धरण; कुनै पनि पृष्ठभूमि हटाउनुहोस् र यसलाई एक मनपर्दोले बदल्नुहोस्; कुनै सम्पादकमा होईन, यो स्पष्टसँग बुझ्नुपर्दछ। हामीले सानो विवरणको साथ टिंकर गर्नुपर्नेछ, कपाल - ताकि सबै प्राकृतिक हुन्छ।
कुनै पनि अनलाइन सम्पादकमा जसले वस्तुहरूको सटीक चयनको लागि तहहरू र उपकरणहरू समर्थन गर्दछ।
यस्तो सम्पादकको उदाहरण। यो अनलाइन सम्पादकको इन्टरफेस पूर्ण विकसित ग्राफिक सम्पादक - एडोब फोटोशपको ईन्टरफेससँग मिल्छ। यदि तपाईंलाई फोटोशपमा कसरी काम गर्ने भनेर थाहा छ भने सजिलैसँग यो अनलाइन सम्पादकसँग व्यवहार गर्नुहोस्।
अब यो परिवर्तन गर्न सम्भव भएको छ पृष्ठभूमि फोटो अनलाइन। यो सत्य हो कि यसका लागि निश्चित सेवा चाहिन्छ, यद्यपि कसैले तपाईलाई प्रक्रियामा तपाईको सिधा सहभागिता हटाउँदैन। यी मध्ये एक सेवा हो फोटोशप अनलाइन, यो प्रकार्यहरूको आवश्यक सेटको साथ संपन्न छ। धेरै सेवाहरू प्रयोग गर्न स्वतन्त्र छन्, तर तपाइँ पनि भुक्तान गर्न सक्नुहुनेछ - सावधान! पृष्ठभूमि परिवर्तन गर्न कत्ति सजिलो छ वस्तु चयन गर्ने जटिलतामा निर्भर गर्दछ। इच्छित क्षेत्र छनौट गर्नुहोस्, र त्यसपछि बटन-कोटमा काम गर्नुहोस्; मार्गदर्शक;, जुन तपाईंको फोटोशप प्रोग्राममा छन्।
अनलाइन फोटोहरूमा पृष्ठभूमि परिवर्तन गर्न तपाईलाई उपयुक्त सेवा चाहिन्छ।
उदाहरणका लागि, त्यहाँ धेरै तथाकथित छन् फोटोशप अनलाइन, जसमा आवश्यक कार्यहरू छन्।
सेवामा लिंक छ जुन तपाईं नेतृत्व गर्नुहुन्छ, तपाईं फोटोमा पृष्ठभूमिलाई सीधा अनलाइन निःशुल्क र पञ्जीकरण बिना बदल्न सक्नुहुनेछ, र यो अनलाईन फोटोशपको इन्टरफेस रूसीमा छ।
त्यहाँ त्यस्ता सेवाहरू छन्: फोटो 505० fun.com.कमान, फनफोटोबक्स.क., fotorotor.ru, अनलाइन-फोटोशप, र केहि अधिक, तपाईं आज इन्टरनेटमा सबै कुरा पाउन सक्नुहुन्छ। केही अनलाइन फोटो सम्पादकहरूले आफूलाई गम्भीरताका साथ लिन्छन्; quot; अनलाइन - फोटोशपकोट; ... तर मैले जाँच गर्न शुरू गरेन कि यस्तो चर्को नाम काम र कार्यको गुणवत्तासँग मिल्छ कि भनेर। यस प्रकारको अनलाइन सेवाहरू सँधै निःशुल्क हुँदैनन्। यदि कोही रुचि राख्दछ भने, तपाईं जाँच गर्न सक्नुहुन्छ ...
22 सेकेन्डमा उत्पन्न डाटाबेसमा 0,757 प्रश्नहरू।